FASHIL: QM oo soo bandhigtay lacagihii ay Soma Oil & Gas ku bixisay laaluushka & Magacyada shaqsiyaad ka… |
FASHIL: QM oo soo bandhigtay lacagihii ay Soma Oil & Gas ku bixisay laaluushka & Magacyada shaqsiyaad ka…
Warbixin ay daabacday Wakaalada Reuters, ayaa lagu xaqiijiyay in Mas’uuliyiin ka tirsan DF Somalia ay dhaqaale adag ka qaaten shidaalka Soma Oil and Gas.
Wakaalada oo xiganeysay Khubaro ka tirsan QM, ayaa sheegay in Mas’uuliyiintaasi ay ka tirsan yihiin Wasaarada bartoolka iyo macdanta dowlada Somalia, iyadoona dhaqaalahaasi ay ku dhacday jeebka Mas’uuliyiintaasi.
Warbixinta ayaa muujineysa in $495,000 ay shirkadu siisay qareen lataliye u ahaa Wasaarada Bartoolka iyo Macdanta DF Somalia, waxaana lagu cadeeyay qoraalka in Mas’uulkaasi uu dhax-dhaxaadiye ka ahaa heshiiska shirkadan reer Britain iyo wasaaradu ay wada galeen.
Xafiiska ladagaalanka musuqa ee wadanka Britain ee SFO, ayaa qoraal ku cadeeyay in baaritaanka uu asalkiisu ahaa mid u socday si hoose, kadibna ay heleen cadeymo leysu haleynkaro oo muujinaayo heerka uu gaarsiisan yahay Musuq-maasuqa dhexmaray DF Somalia iyo Soma Oil and Gas.
Soma Oil and Gas, ayaa ku adkeysaneysa in baaritaankaasi uu yahay mid aan xaqiiqo aheyn, waxa ayna shirkadu ku doodeysaa in qandaraaska uu yahay mid ay bixisay DF Somalia, islamarkaana uusan ka imaan doonin wax khilaaf ah, waa hadii meesha laga saaro eedeymaha loo jeedinaayo.
Wakaaladu waxa ay qoraalkeeda ku cadeysay in Wasiirka Wasaarada Batroolka iyo Macdanta DF Somalia, ay la sameeyen xiriir si looga salgaaro arrinta muranka badan dhalisay, hayeeshee uu Wasiirku diiday inuu wakaalada Reuters kala hadlo eedeyntan ku aadan Heshiiska isku bedelay musuq-maasuqa.
Geesta kale, QM oo iminka heshay cadeeymaha ka turjumaaya xaqiiqda jirto, ayaa wado qorsho lagu xoojinaayo baaritaanada, waxa ayna sanadii 2013 ku baaqday hakinta heshiisyada dhexmaray DF Somalia iyo Shirkada, hayeeshee waxa ay ka baqaneysay ay iminka soo ifbaxayaan.